Shinoa Mametaka ny tantaram-pitondran-tantely any Shina miaraka amin'ny orinasa Tin Lid sy mpanamboatra | Chuancheng
Fiadiana amin'ny alikaola
Tavoahangy misotro labiera
Misotroa tavoahangy amin'ny tanana
Ny tavoahangy Pudding
Vatosaky ny vorona
Mason Jar Wedding Favors Apothecary Jars Honey Pot B ...
Ranomaso boribory voahodidin-tantely miaraka amina Tin Lid
Fivarotana mafana ao an-dakozia fametahana kitapo fitehirizana sakafo fitehirizana trondro ...
Lovia farafahakeliny Brew Classic mahazatra
Sakafo masirasira fitetezana menaka misy tavoahangy misy menaka sy ...
Solika Oliva sy vovo-menaka varimbazaha
Crystal Candy Jar miaraka amina Lid, sakafo fitaratra vera mazava ...
Toerana mety hitazonana ny tantely na siramamy voajanahary amin'ny toe-javatra mety. Ny famolavolana maoderina dia mahafinaritra amin'ny fandrahoan-tsakafo ao amin'ny lakozia na ny fanompoana amin'ny latabatrao
Ny fehikibo miendrika tifitra dia mifanentana amin'ny vava tavoahangy mba hisorohana ny rano malaky. Tena azo antoka ampiasaina. Ny tantely dia hita mazava ao anaty tavoahangy mangarahara.
Mazava io tavoahangy io, ka manjary fampirimana tsara ho an'ny tantelinao.
Azo atao ny misokatra sy mihidy malefaka sy mora.
Jar-tsarety tonga lafatra ka mitete tantely: Ny vilan'ny tantely bitika misy sarony ary hazo mangarahara mitete tantely, mora manampy tantely misy zava-pisotro mafana na mofo tsy mandoto fitaovana manjary ary tsy manao makorelina.
Ny tantely dia mijanona amin'ny havaozina sy mora hotratrarina: misy fanokafana eo amin'ny sisiny mba hihazonana ilay vovo-javamaniry, ity mpiambina tantely ity dia tsy amin'ny rivotra.
Ny vilan'ny tantely dia vita amin'ny vera borosilika avo be tsy misy poizina, tsy misy poizina, tsy misy loto, tsy fahita firy, tsara tarehy, Transparent.9 ony mahery.
Manamboatra fanomezana lehibe ho an'ny tompon-trano vaovao, tia ny dite, na izay mankafy mahandro. Ity fitaratra matanjaka mahazatra sy manjavozavo ity dia manampy fanampiny ho an'ny lakozia rehetra ary antoka hisarika ny saina.
Manomeza tantely mora foana amin'ny zava-pisotro mafana na mofo tsy amboarina amin'ny fitaovana bebe kokoa na mahatonga fahatapahana.
Tsy misy poizina, tsy misy fofona, tsy misy loto, tsara tarehy ary mangarahara. Fahasalamana maitso.
Ny famolavolana mangarahara dia manamora ny hahitana izay tavela ao anaty vilany.
Tantely sy alàlan'ny famolavolana potiky ny potaka ho an'ny filanao
Ny fanatonana ny rakotra fitaratra dia mahavita manakana ny tantely tsy hiditra amin'ny vovoka.
Toerana mety hitazonana ny tantely na siramamy voajanahary amin'ny toe-javatra mety. Ny famolavolana mahavariana dia mahafinaritra amin'ny fandrahoan-tsakafo an-dakozia na manasa amin'ny latabatraoFlip-top screw cap dia mifanentana amin'ny vava tavoahangy mba hisorohana ny fako anaty rano. Tena azo antoka ampiasaina. Tantely dia hita mazava ao anaty tavoahangy mangarahara. Mazava tsara io boaty io, ka mahatonga azy ho fitaovana fampisehoana tsara ho an'ny tantelinao.
Azo vonoina ny bara ary mikatona malefaka sy ea
Previous: Varotra an-dakozia mafana fivarotana tavoahangy fitahirizana siny tavoahangy misy rakotra vy
Manaraka: Mason Jar Favour Apothecary Jars Honey Pot Bottles
Tavoahangy vera ho an'ny tantely
Hexagon Honey Jars
Tantely fitaratra tantely
Tavoahangy tantely afa-tsy
Hexagonal fitaratra tantely tantely
Kianja tantely Square
Ny valan-tsakafo fitehirizana tantely ara-tsakafo ara-dalàna
Varotra an-dakozia mafana fivarotana sakafo fitahirizana sakafo ...
Mini Glass Hexagon Jars
Mason Jar Wedding Favors Apothecary Jars Honey ...
Misoratra anarana ao amin'ny Gazetintsika:
Efitrano 1404, fananganana 3, junsheng plaza, pailou lalana, distrika gulou, tanàna xuzhou, faritany jiangsu
Mandefasa mailaka izahay